Qaraxyo caawa ka dhacay Muqdisho iyo ciidamo aad u badan oo lagu daadiyay wadooyinka - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qaraxyo caawa ka dhacay Muqdisho iyo ciidamo aad u badan oo lagu daadiyay wadooyinka
Kooxo hubeysan ayaa caawa Bam gacmeed ku weerartay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo fariisin ku leh isgoyska Jid Mareexaan ee ku yaala degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho, iyadoona qaraxa kadib la maqlay rasaas badan.
Saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa u sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay 1 qof oo shacab ah, iyadoona sidoo kale uu ku dhaawacmay 1 askari oo ka tirsan ciidanka NISA.
Sidoo kale, Bam gacmeed kale ayaa isla caawa lagu weeraray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa xaafadda Barafuunka ee degmada Heliwaa, inkastoo aan la xaqiijin karin qasaaraha ka dhashay weerarkaas.
Dhinaca kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa caawa amar ku bixiyay in howlgalo waaweyn laga sameeyo xaafadaha ku yaala degmooyinka magaalada Muqdisho, halkaas oo maalmihii ugu dambeysay uu ammaankoda sii xumaanayay.
Waxaa wadooyinka magaalada Muqdisho caawa lagu arkayaa ciidamo badan oo isugu jira nabad-sugid iyo kuwa boolis ah, waxaana haatan socda howlgalo lagu sugaayo ammaanka magaalada.
Qaraxyadaan caawa laga maqlay magaalada Muqdisho ayaa daba-socda qaraxyo ismiidaamin ah oo maanta lagu qaaday Hoteel Wehliye ee gobolka Banaadir, waxaana qaraxyadaasi ku geeriyootay in ka badan 10 qof, halka 30 kalena ay ku dhaawacantay.